Izindaba - Siyakwamukela ukuvakashela inkampani yethu
I-Fuyang Bestop Import And Export Ltd. isungulwa ngonyaka we-2011 ngeminyaka engaphezu kwengu-10 ithumela okuhlangenwe nakho. Singumqalisi wokusebenza ngamakhambi aseChina asebenzisana ne-esp ngokukhipha umuthi wendabuko emhlabeni wonke.
Siphethe ifektri eqinisekisiwe ye-GMP, sinikela ngamakhambi we-ORGANIC kumakhasimende ethu. Ihhovisi lethu lisendaweni yaseFuyang, esifundazweni sase-Anhui; I-workshop itholakala eBozhou, eyaziwa ngokuthi idolobha laseHuaTuo, imakethe enkulu yemifino yaseChina. Besilokhu sizinikela empilweni yomuntu, futhi sisabalalisa isiko lendabuko lamaShayina.
IFuyang Bestop ithatha kakhulu ekusebenzelaneni nomuthi wamakhambi waseChina, izimbali zemvelo ezomisiwe, ukukhishwa kwezitshalo, uwoyela obalulekile neminye imikhiqizo ehlobene enempilo; Kunikelwe ekucwaningeni, ekuthuthukiseni nasekuthengiseni imboni yezempilo. Sakha izisekelo ezahlukahlukene zezitshalo ezifundeni ezahlukahlukene ukuqinisekisa yonke into ethengisa kusuka kumsuka ezandleni zamakhasimende ngqo, akukho khomishini yenzuzo yabaphakathi.
Ngaphandle kwezitifiketi ezidumile esinazo njenge-FDA, HALAL, ne-ISO cert, yonke imibhalo edingekayo inganikezwa NGOKUKHULULEKILE, njengesitifiketi se-phytosanitary, isitifiketi sezempilo, isitifiketi se-fumigation, i-invoyisi yezentengiso nohlu lokupakisha, njll.
Singumhlinzeki onokwethenjelwa webhizinisi lokuthengisa kabusha, amaklayenti ethu amaningi enza ibhizinisi lawo ngewebhusayithi ye-RETAIL efana ne-Amazon, Wish, Ebay njll ... world futhi uthole idumela eliphakeme kakhulu embonini yethu manje. Ikhwalithi engcono kakhulu, intengo ephansi futhi okungcono ngemuva kwensizakalo yokuthengisa ingaqinisekiswa kahle. I-MOQ iphansi kakhulu ngisho nokuhleleka ngokwezifiso. Yonke imikhiqizo ikhona nge-OEM, wamukelekile ukwenza uphenyo bese uthola ISISAMPULA MAHHALA!
Siphethe imikhiqizo emibili edumile emakethe yasekhaya njengoba ingezansi:
UFuyang Bestop --- unikela ngemikhiqizo ehamba phambili & ephezulu yenani lakho!
I-Goherbal --- Go herbal, Go nature, Go health!
Silandele ukuze siphile impilo elula enempilo!